अर्थ हराएको निर्वाचन - Karobar National Economic Daily
query_builderNovember 3, 2017 11:35 AM supervisor_accountप्रा.डा. विकासराज सत्याल visibility1565
प्रा.डा. विकासराज सत्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तथ्यांक शास्त्रका प्राध्यापक
यो वर्ष पूर्ण रूपले मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा लाग्यो । यसले विकासको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । चालू आवको तीन महिनामा लक्ष्यको तुलनामा केवल ५ प्रतिशतको काम भएको देखिन्छ । अझै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बाँकी छ । यो वर्षको बजेट बनाउन अबका केही वर्ष विदेशीसामु ठूलै भाडो थाप्नुपर्ने देखिन्छ, ठूलै बन्धनमा पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले आउँदो आर्थिक वर्षको वृद्धिको पूर्वानुमान पनि असत्य हुने देखिन्छ । निर्वाचनको पैसा चलायमान हुँदा रेस्टुरा, होटल व्यवसाय, खाद्यान्न र पेयको खपत बढेको छ भने जग्गामा लगानी बढ्ने सम्भावना छ । तर, उद्योग तथा अन्य व्यवसायमा ध्यान दिन नसकेको हुनाले श्रम बजार झनै निराशाजनक हुनेछ । फलस्वरूप, नयाँ वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य नखोजी सुख छैन । फलस्वरूप म्यानपावर केही वर्ष अझै फस्टाउनेछन् । युवा पलायन बढ्नेछ । व्यापारघाटा अझै फराकिलो हुनेछ । मुद्रास्फीति बढ्नेछ । यसरी वर्षभरि चलेको अर्थहीन निर्वाचनले आर्थिक दुर्गति बढाउने देखिन्छ ।
निर्वाचन अर्थतन्त्र लोकतन्त्र संविधानसभा प्रतिनिधिसभा